မြန်မာ / Burmese - Information in your language - Australian Government Department of Human Services
Families Separated parents Job seekers Older Australians Your health People with disability Students and trainees Migrants, refugees and visitors Carers Rural and remote Australians Indigenous Australians Help in an emergency မြန်မာ / Burmese - Information in your language
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေးငွေများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်းကို သင် လေ့လာနိုင်ရန် ဘာသာပြန်ဆိုထားသော အချက်အလက်များ၊ အသံသွင်းနှင့် ရုပ်မြင် အခွေများကို ကျွန်ုပ်တို့တွင် ထားရှိပါ သည်။
အကယ်၍ သင်သည် အအထာက်အကြူ ပုနည်ြ ပညာကိူ အသြူံြ ပုအနြပြီ ကျွန်ြူပ်တိုြ ၏ ဘာသြာ ပန်ဆြို ပီ အသြာ အချက်အလက်မျာ ကိူ မရယူနြိူင်လျြှင် ၊ ကျွန်ြူပ်တိုြ ၏ ဘာသာစကာ အပြါင်ြ စူံ ဖူန်ြြ ဖင်ြ ၀န်အဆြာင်မှု ကိူ အကျြ ဇူြ ပု၍ ဆျက်သယ်ပါ။. If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေးငွေများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ အချို့အကြောင်း များအားဘာသာပြန်ပေးထားသည့် ရေးသားချက် အမျိုးမျိုးကို လှန်လှော၍ ဖတ်ရှုပါ။
Are you travelling outside Australia? / သြစတြေးလျနိုင်ငံ ပြင်ပသို့သင် ခရီးထွက်မည်လား Assurance of Support
Assistance for child care / ကလေးထိန်း အတွက် အကူပံ့ပိုးပေးငွေ
Consent to disclose medical information form (SA472)
Family and domestic violence. It’s time to say enough / မိသားစုနှင့် အိမ်တွင်း အကြမ်းဖက်မှု။ တော်လောက်ပြီး ဟုပြောရန် အချိန်ကျရောက်ပြီ။
Recently arrived in Australia? / သြစတြေးလုနိ င်ငံသိ့  လတ်တလော ရောက်ရှိခဲ့ပါ ပါသလား။
Residency requirements for family payments
Status Resolution Support Service payment / လူဝင်မှုအဆင့်အတန်း ဖြေရှင်းမှု ပံ့ပိုးရေး ၀န်ဆောင်မှု ထောက်ပံ့ငွေ
Status Resolution Support Service payment - Reporting your income
What if you do not agree withadecision? / ဆုဵျ့ဖတးခ်ကးတစးခုကို သငး သဘောမတူပါက ဘာလုပးရမညးနည့း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထောက်ပံ့ပေးငွေများနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများအနက် အချို့တို့နှင့် ပတ်သက်သည့် ဘာသာပြန်ထားသော အချက်အလက်များကို ကြည့်ရှုပါ။
New to Australia—Payments / သြစတြေးလျတွင် လူသစ် - ထောက်ပံ့ပေးငွေများ
Department of Human Services' Centrelink ထောက်ပံ့ပေးငွေများနှင့် Centrepay ဟုခေါ်သည့် အခမဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခု အကြောင်းကို ဤဗီဒီယိုတွင် ပြသထားသည်။ Centrepay သည် ထောက်ပံ့ပေးငွေများကို ရရှိကြသည့်လူများအား ရသုံးငွေကြေးကိုစီမံစေရန်နှင့် အိမ်ထောင်စု ကျသင့်ငွေတောင်းပြေစာများ ကဲ့သို့သော နေရေးထိုင်ရေး ကုန်ကျစရိတ်များ အတွက် ပေးချေရန်ငွေကိုချန်ထားစေရန် ထောက်ကူပေးပါသည်။
This video talks about Department of Human Services' Centrelink payments andafree service called Centrepay. Centrepay helps people who get payments to budget and save money to pay for living expenses like household bills.
သြစတြေးလျတွင် လူသစ် - ထောက်ပံ့ပေးငွေများ YouTube ကို ကြည့်ရှုပါ။/ Watch on YouTube New to Australia—Payments
သြစတြေးလျတွင် လူသစ် - ထောက်ပံ့ပေးငွေများ ရေးသားချက်များကို ဖတ်ရှုပါ။/ Read New to Australia—Payments transcript
New to Australia—Medicare Card and Health Care Card / သြစတြေးလျတွင် လူသစ် - Medicare Card နှင့် Health Care Card
Medicare Card နှင့် Health Care Card နှင့် သင် ရရှိနိုင်သည့် သက်သာခွင့် အမျိုးအစားများ အကြောင်းကို ဤဗီဒီယိုတွင် ပြသထားသည်။ သင်၏ အခြေအနေများ ပြောင်းလဲသောအခါ ဌာနကို ပြောပြရန် အရေးကြီးပါသည်။
This video talks about the Medicare Card and the Health Care Card and the types of concessions you can get. It is important to tell the department when your circumstances change.
သစတြေးလျတွင် လူသစ် - Medicare Card နှင့် Health Care Card YouTube ကို ကြည့်ရှုပါ။/ Watch on YouTube New to Australia—Medicare Card and Health Care Card
သစတြေးလျတွင် လူသစ် - Medicare Card နှင့် Health Care Card ရေးသားချက်များကို ဖတ်ရှုပါ။/ Read New to Australia—Medicare Card and Health Care Card transcript
New to Australia—Looking for work / သစတြေးလျတွင် လူသစ် - အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေခြင်း
အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေနေသောသူများအတွက် Department of Human Services က ပေးအပ်သည့် Centrelink ထောက်ပံ့ပေးငွေ တစ်ခုဖြစ်သော Newstart Allowance အကြောင်းကို ဤဗီဒီယိုတွင် ပြသထားသည်။ ၎င်းဗီဒီယိုသည် အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေနေစဉ် မိမိတို့၏ ထောက်ပံ့ပေးငွေများ ကိုဆက်လက် လက်ခံရရှိနေရန်အလို့ငှါ ထောက်ပံ့ပေးငွေ ရရှိသည့်သူများ လိုက်နာကြရမည့် တာဝန်ဝတ္တရား အမျိုးအစားများကိုလည်း ရှင်းပြထားပါ သည်။
This video talks about Newstart Allowance,aCentrelink payment that the Department of Human Services provides to people who are looking for work. It also explains the types of obligations that people who get the payment must meet, in order to keep receiving their payment while they look for work.
သြစတြေးလျတွင် လူသစ် - အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေခြင်း YouTube ကို ကြည့်ရှုပါ။/ Watch on YouTube New to Australia—Looking for work
သြစတြေးလျတွင် လူသစ် - အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေခြင်း ရေးသားချက်များကို ဖတ်ရှုပါ။/ Read New to Australia—Looking for work transcript
No Yes Leave this field blank Page last updated:5July 2017